पुनर्वासका जनप्रतिनिधिलाई हेमन्त रेग्मी “हेप्पी” को खुलापत्र ।।
श्रीमान् जनप्रतिनिधि ज्यू,
एउटा राजनितीमा आवद्ध भएर होला मेरो देश नेपाल भरी सबै जिल्लामा थुप्रै साथी छन् । आजभोलि मलाई पुनर्वास घर भनेपछी चिनाउन खासै गाह्रो पर्दैन । कञ्चनपुर बाहिरका साथीहरुले नि ए त्यो सिमा बिवाद भैरहने ठाउँ भनेर चिन्ने गरेका छन् । अझ भनौँ शहीद गोविन्द गौतमको ठाउँ भनेर चिन्ने गरेका छन् । हामीले उनको पुनर्वास र उनको नाम बेचेर कसैले चिनिने मौका पाएका छौँ, कसैले त्यही नाम बेचेर राजनिति गर्ने मौका पाएका छौँ ।
सिमा विवाद आज देखि हैन हामीले सुन्दै आएका हौँ, कहिले राती आफ्नो घरमा सुतेको मान्छे बिहान भारतमा पुग्छ, कारण रातारात पिल्लर सारिन्छ । कसैको लालपुर्जा नेपालमा हुन्छ, जमिन भारतमा हुन्छ । नेपाल प्रहरीकै अगाडि तारबार भत्काइन्छ । प्रहरी प्रशासन, स्थानीय निकाय टुलुटुलु हेर्नुको बिकल्प छैन । मेयर, उपमेयर देखि मन्त्री, सभासद यही मुद्दा लिएर कुनै बेला भोट बटुलेको स्थानीयका मानसपटलमा ताजै छ ।
प्यारा ताल हाम्रो हो भन्दै भारतीय पक्षबाट पिल्लर यता सारिन्छ, हामी चुप छौँ हामी मौन छौ, यो मुद्दा अहिले कहाँ छ ? के हुँदै छ ? अब यति बेला हैन चुनाब आएपछि जानकारी भैहाल्छ । किनकी भोट माग्दा सबै उम्मेदवारले प्रमुख एजेन्डा मध्ये एउटा एजेन्डा यही बनाउने छन् । ढुक्क हुनुस्, त्यति बेला जानकारी हुनेछ । त्यति बेला सुगौली सन्धी देखि सबै कुरा सुगा रटाइ गरेर नेताहरु आउनेछन् । सिमा बिवाद सामधान हुन्छ भन्नेछन् ।
तर नेता ज्युहरुमा एउटा आव्हान छ, कृपया सुगौली सन्धी सबैले नबुझ्न सक्छन्, बुझ्ने हामीले यत्ती हो हाम्रो पुनर्वासको सिमाना कँहा देखि कँहा सम्म हो कृपया यहि कुरा थाहा पाउन फेरि अर्को गोविन्द गौतम नजन्मनु परोस् । यहाँ देखि यहाँ सम्म पुनर्वास हो भन्ने जानकारी रहोस् । कृपया अस्ति तपाईहरु भोट माग्न गएको ठाउँ त्यता नजाउँ, त्यो भारत हो भन्ने दिन हामी र हाम्रो पछिल्लो पुस्ताले भोग्नु पर्छ कि भन्ने डर छ ।
हामी आफ्नो पुस्तालाई गर्व साथ भन्न सकौँ, हाम्रा अघिल्ला पुस्ताका नेता ज्युहरुले यति गर्नु भएको थियो र आज हामी यहाँ छौँ, आज हाम्रो पुनर्वास यहाँ छ, हामी हाम्रो क्षेत्रफल याद राख्न सकाँै । हामी हाम्रो सिमाना याद राख्न सकौँ, हामी हाम्रा पिल्लरका नम्बर याद राख्न तयार छौँ, ताकी कसैले हाम्रो भुभागमा गिद्देनजर लगाउन नसकोस् ।
हामी युवा फेरि गोविन्द गौतम हुन तयार छौँ, तर एक चिम्टी माटो हामी जस्ता हजारौँ युवाका लागि प्राण भन्दा प्यारो छ, मेरो पुस्ताका नेता ज्युहरुलाई मेरो आव्हान छ, तपाईहरु सिमा विवाद यसरी समाधान गरिदिनुस कि हामीले पनि भन्न सकौँ तपाईँहरुको त्यो आँट, साहस र त्यो कर्मले गर्दा आज हामीले यति गर्वका साथ तपाईँहरुको नाम लिन पाईरहेका छौँ ।
यति गर्दिनु भयो भने शहिद गोविन्द गौतमको आत्माले शान्ती त पाउँछ नै, हामी जस्ता हजारौँ युवामा तपाईहरु प्रति सम्मान अझ बढी हुनेछ । यस्ता मुद्दा केवल चुनावका बेला मात्र नभई अरु बेला समाधानका उपाय सोच्नुस् । यदि साथ र सहयोग चाहिन्छ भने म जस्ता हजारौँ युवा तपाईँको साथमा हुनेछन् ।
तपाईंहरुलाई काम गर्न सहयोग गर्ने हजारौ म जस्ता हेमन्तहरु तयार छन् । बस्, तपाईंहरुले काम थालनी गर्नुपर्यो । केबल चुनावका एजेन्डामा मात्र सिमित नरहेर यो काम मेरो हो र मेरो कर्तव्य हो भनेर लाग्नुस् । म तपाईंहरुलाई घच्घच्याउन हामी जस्ता युवा सधै यस्तै भुमिकामा त रहने नै छौँ । तपाईंहरुले गरेको ह मा हैँसे मिलाउन हामी सधै तयार छौँ ।
जय राष्ट्र, जय स्वाभिमान, जय नेपाल !!!
हेमन्त रेग्मी “हेप्पी” पुनर्वास नगरपालिका ६, कञ्चनपुर ।
हाल प्रदेश नम्बर ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी